धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने ? - Nepaliraibar
धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने ?
प्रकाशित मितिः २०७८ बैशाख १२, आईतवार
काठमाडौंँ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएको आज ६ वर्ष पुगेको छ । महाभूकम्पको सम्झना अहिले विभिन्न कोणबाट भैरहेका छन् । भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरहरा पुरानै स्वरुपमा आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर नयाँ निर्माण भएको छ ।
जसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार गरेका थिए । धरहरा पहिलेभन्दा झन् बलियो बनोटका साथ निर्माण भएकोमा सबै खुसी छन् । सबैको चिन्ताको विषय देश उठ्न नसकेकोमा रहेको छ । अभिनेत्री गौरी मल्लले पनि यस्तै चिन्ता गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा धरहरा उठेको खुसी ब्यक्त गर्दै देश उठ्न नसकेकोमा चिन्ता राखेकी हुन् ।
उनले अगाडि केही प्रश्न समेत गरेकी छन् ‘धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने रु मेरा देशवासीको पनि धरहराको जस्तै त्यो बलियो जग भएको जीवनस्तर कहिले बन्ने रु’ हरेक कोण–कोणबाट गिराइसकिएको मेरो देशले शानले फेरि कहिले शिर उठाउन पाउने…? धरहराले जस्तै….! ’ अभिनेत्री मल्ल अहिले फिल्म ‘डाँडापारीको बर पिपल’ अभिनयरत छिन् ।
संक्रमण नरोकिए अस्पतालमा ठाउँ हुने छैन, मापदण्ड पालना गरौं
एमालेका ४ सांसदलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पत्र दर्ता